महाराजको नस्ली घोडा, राजकन्या र किसानको छोरा « AayoMail
2021,19 June, 2:02 pm
राजाको दरबारमा एउटा गरिबले आएर प्रार्थना गर्‍यो–सरकार घर परिवार चलाउन गाह्रो परेको छ। कुनै जागीर पाए म गरिबको कल्याण हुने थियो।
राजाबाट हुकुम भयो-तिमीलाई के आउँछ, तिमी के गर्न सक्छौ?
सरकार म पढे लेखेको छैन। तर जोगीहरुको सँगत र सत्संगले मलाई कुनै पनि जनावर र मानिसको व्यवहार र अनुहार हेरेर तिनको बारेमा सबै कुरा थाहा हुन्छ। सरकारले सेवाको अवसर दिए म यो कुरा प्रमाणित गर्न सक्छु।
राजाले त्यस मानिसलाई आफ्ना घोडाको दाना-पानी-स्याहार-सुसारको काम दिए।
राजासँग एक से एक राम्रा उच्च नस्लका घोडा थिए। एक दिन राजाले आफ्नो प्रिय घोडाका बारेमा सोधे-हेर यो सबैभन्दा महंगो घोडा हो, तिम्रो ज्ञानले यसका बारेमा के भन्छ?
‘हजूर राम्रो जातको भए पनि यो नस्ली होइन।’
राजाले घोडाका व्यापारीलाई बोलाएर सोधे- तिमीले यो घोडा उच्च नस्लको भनेर बेचेका थियौं, मलाई थाहा हुन आयो तिमीले झूठो बोलेका रहेछौ। साँचो सत्यतथ्य कुरा भन, अन्यथा दण्डका भागी हुनेछौ।
‘महाराज क्षमा पाउँ। घोडा त नस्ली नै हो, तर महाराज यो जन्मिनासाथ यसको आमाको निधन भएको थियो र यसलाई मैले एउटा गाईको दूध खवाएर हुर्काएको थिएँ। यसको बाल्यकाल र परवरिश भने गाईको सँगतमा भएको हो।
राजाले तुरुन्तै आफ्नो नयाँ सेवकलाई बोलाएर सोधे–तिमीले कसरी थाहा पायौ कि घोडा नस्ली होइन?
महाराज कुनै ठूलो विज्ञान होइन। मैले के पाएँ भने यस घोडाले घास खाँदा गाई झैं टाउको निहुराएर खान्छ जबकि घोडाले घाँस मुखमा राखेर टाउको माथि गरी खाने गर्छन्। यस स्वभावले नै मैले थाहा पाएँ यो घोडा नस्ली होइन।
त्यस व्यक्तिको सूक्ष्म विश्लेषण सुनेर राजा अति प्रसन्न भए। उसलाई पुरस्कारस्वरुप अन्न, घिउ, कुखुरा खसी बाख्रा आदि सामग्री प्रदान गरे। र, उसको पदोन्नति गर्दै उसलाई रानीको सेवामा नियुक्ति दिए।
केही समयपश्चात् राजाले त्यस व्यक्तिलाई बोलाएर रानीका बारेमा सोधे।
‘चाल चलनले त उहाँ रानी देखिनु हुन्छ। शानो–शौकत पनि रानी झैं नै छ तर उहाँ जन्मले राजमहिला होइन।’
राजा रिसले मुरमुरिए। तर उनले व्यक्तिलाई दण्ड दिनु पहिला सत्यतथ्य जान्ने विचार गरे। उनले तत्कालै आफ्नो सासुलाई दरबारमा बोलाउने आदेश दिए।
सासुले उपस्थित भएर सम्पूर्ण प्रकरण सुनाइन्–महाराज हजूरको बुबा र मेरो श्रीमानबीच राम्रो मित्रता थियो। दुबै राज्यबीच सुमधुर सम्बन्ध थियो। हजूरको जन्म भएपश्चात् मैले पनि एउटी छोरी जन्माएँ। यस अवसरमा हजूरको बुबा पनि हाम्रो राज्यमा आउनु भएको थियो। र, दुवै देशको मैत्री सम्बन्धलाई झन् प्रगाढ़ गर्ने हेतुले उहाँले हजूर र मेरो छोरीको बिहे गर्ने प्रस्ताव राख्नु भयो। हामीले प्रस्ताव सहज स्वीकार गर्‍यौं ।
तर विधिको विधान हाम्रो छोरी ६ वर्षको हुँदा नै बितिन्। हजूरको बुबा र हजूरको राज्यसँग सम्बन्ध राख्ने हेतुले हामीले यो कुरा लुकायौं र एउटा गरिब घरकी केटीलाई मागेर आफ्नी छोरी झैँ हुर्कायौं। हजूरको रानी जन्मले राजकन्या होइनन्।
राजाले सेवकलाई बोलाएर सोधे-तिमीले कसरी थाहा पायौ कि रानी जन्मले राजकन्या होइनन्?
महाराज अरु सबै कुरामा उहाँको चालचलन रानी जस्तै छ। तर उहाँले आफ्ना सेवक र नोकर आदिप्रति गर्ने व्यवहार एकदमै निम्नकोटीको छ। सानो–सानो कुरामा उहाँ अभद्र ढंगले गाली गर्नुहुन्छ। राजकुलका व्यक्तिको आफूभन्दा निम्नस्तरका व्यक्तिसँग गर्ने व्यवहारमा आफ्नो एउटा गरिमा हुन्छ। क्षुद्रता हुँदैन।
अब राजाले सेवकसँग रिसाएर दण्ड दिने कुरा भएन। राजाले सेवकलाई अनेको खसी, बाख्रा, कुखुरा र खाद्य सामग्री उपहारस्वरुप दिए। अब राजाले त्यस मानिसको प्रतिभा चिनेर उसलाई आफ्नो सेवामै नियुक्त गरे।
एक दिन राजाले उसलाई सोधे- मेरो बारेमा तिम्रो के विचार छ?
‘महाराज हजूरका बारेमा भनेर हजूरको कोपबाट म कसरी उम्किन सक्छु!’
‘डराउनु पर्दैन। तिमीलाई लागेको कुरा भन।’
‘महाराज जागीर गए पनि जाओस् तर महाराजले मलाई मेरो प्राणरक्षाको वचन दिनु पर्छ।’
राजाले हाँस्दै भने-तिमी निष्फ़िक्री भएर भन, तिमीलाई कुनै पनि किसिमको दण्ड हुने छैन।
‘रिसानी माफ होस्। हजूर न त राजाको छोरा नै हो, र हजूरको चाल-चलन-व्यवहार पनि राजाको जस्तै छैन।’
राजा रन्किँदै मुमा बडामहारानीको कक्षमा गएर सोधे– म को हुँ? के म तपाईंको पुत्र होइन?? के म राज खानदानको पुरुष होइन?? मलाई साफसाफ सबै कुरा भन्नुस्। आज म सत्य सुन्न चाहन्छु।
‘यो साँचो हो, तिमी मेरो पुत्र होइन। राज खानदानको सदस्य पनि होइन।’
‘को हो म?’
‘धेरै वर्षसम्म मेरो कुनै सन्तान भएन। राजवैद्यले हामी दुवैको भाग्यमा सन्तान सुख नभएको भने। अन्त्यमा मन्त्रिपरिषद्को सल्लाहले हामीले एउटा गरिब हलीलाई मनग्गे धनसम्पत्ती दिएर उसको छोरालाई अपनायौं।’
राजाले आफ्नो कथा थाहा पाए। उनी सोझै त्यस सेवक बस्ने क्वार्टरमा गए।
राजालाई आफ्नो क्वार्टरमा आएको देखेर सेवक डरले काम्न थाले।
‘तिमीले डराउनु पर्दैन। म तिम्रो कुनै अहित गर्दिन। पानी खाऊ र मेरो एउटा प्रश्न, एउटा जिज्ञासाको समाधान गर।’
त्यस व्यक्तिले राजाको अनुहार र भाव भंगिमाले सबै कुरा बुझिसकेको थियो। उसले पानी खाएर भन्यो-महाराज हजूरले सोध्न गईरहेको प्रश्न नै मसँग हजूरले सोध्ने अन्तिम प्रश्न हुनेछ। यसपछि हजूरले कुनै प्रश्न सोध्न पाउनु हुने छैन।
‘त्यसो भए पहिला यसै प्रश्नको जबाब देऊ, मेरो प्रश्न अन्तिम प्रश्न किन हुन्छ?’
‘किनकि महाराज मुमा बडामहारानीबाहेक मलाईमात्र थाहा छ हजूर राजपुरुष नभएर कुनै गरिब किसान अथवा हलीको छोरा हो। मुमा बडामहारानीबाट हजूरलाई रहस्य सार्वजनिक हुने कुनै खतरा हुन्न। तर मप्रति हजूरको मनमा सधै शंका रहन्छ। तसर्थ आफ्नो प्रश्नको जबाफ पाउनासाथ हजूरले मलाई आफ्नो राज्यबाट निष्कासित गर्नुहुन्छ।
‘अब भन तिमीले कसरी थाहा पायौ म राजपुरुष नभएर कुनै गरिब घरमा जन्मिएको थिएँ?’
‘हजूरको चालचलन र व्यवहारले महाराज। कुनै राजपुरुषले कसैसँग प्रसन्न हुँदा उसलाई हीरा-मोती-अशर्फी उपहारमा दिन्छन्। तर हजूरले मलाई प्रसन्न हुँदा खसी-बाख्रा-कुखुरा उपहारमा दिनु भयो। मैले यसैबाट सहज अनुमान लगाएँ, हजूर जन्मले राजपुरुष होइन। यो व्यवहार कुनै गरिब व्यक्ति-किसान-हलीको घरमा जन्मिएको व्यक्तिमा नै हुनसक्छ।’
व्यक्तिले लगाएको अनुमान अनुसार नै राजाले उसलाई पर्याप्त मात्रामा धन दिएर राज्य छाडिजाने आदेश दिए।
नोट-यो एउटा सामान्य बोध कथा हो। वर्तमानसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन। केही पात्रसँग कथा अनुसारको चरित्र घटित हुन गयो भने त्यो फगत संयोग हुनेछ।